Kuyaqhubeka ukwebiwa kukagesi | News24
Kuyaqhubeka ukwebiwa kukagesi
Thami Charles Nkosi
UDABA lokuntshontshwa kukagesi ezindaweni ezakhele iBoboyi,iMurchison naseMkholombe lubonakala lusekude ukulungiswa
Lokhu kuvele ngesikhathi amalungu omphakathi esezwakalise ukungagculiseki ngendlela ugesi ohamba ngayo kulezi ndawo ikakhulukazi lawo asawubambile umthetho wokukhokhela ugesi nokuthenga amakhadi kagesi.
Amalungu omphakathi athe sekuseduze ukuba ahlele izingxoxo nobuholi bukamasipala nenkampani kagesi i-Eskom ukuze kutholakale isisombululo mayelana nodaba lwabantu abaxhume ugesi ngokungekho emthethweni nalabo abangawakhokheli amakhadi kagesi.
Ilungu lomphakathi elingathandanga ukudalulwa elihlala eBoboyi liveze ukuthi kukhona abantu abaningi abanemiqasho kule ndawo, f uthi banoxhaxha lwezindlu okusolakala ukuthi ugesi abawukhokheli nhlobo.
Kweminye imizi kutholakale ukuthi yizona iziqashi ezixhume ugesi ngokungemthetho nokwenza ugesi ugcine sewudonsa kanzima.
“Iyasikhathaza kakhulu lendaba yalabantu abangawukhokheli ugesi ngoba thina esiwukhokhelayo sigcina sesifaka ikhadi likagesi eliphela kungakafiki isikhathi kanti ilaba abacuphe izigubhu zika gesi bebe beshaya ngoxhaxha lwezindlu zemixhaso,”kusho lelilungu lomphakathi.
Elinye lithe ngaphambilini inkampani ephakela ngogesi yayike ikwazi ukuhamba igqigqe imizi ibheka ukuthi ngabe abantu basawukhokhela yini ugesi kodwa lokho kubonakala kungasenzeki.
“Sekuphele izinsuku cishe ezinhlanu ugesi singenawo kodwa uma sithi sijikela kwabakwa Eskom singalutholi usizo, kunalokho kwafika omunye wangitshela ukuthi kukhona izintambo eziya kweminye imizi ezixhunywe esigujini ngokungafanele, lokho kwenza amandla kagesi agcine engasahambi kahle.”
Elinye ilungu lithe njengoba kuyisikhathi sasebusika kuba nzima kakhulu ngoba abanye abantu besebenzisa ugesi ngokweqile, ngisho izifudumezi zokudla kube nzima ukuthi zisebenze.
Abenkampani ephakela ugesi abatholakalanga ukuba bephawule ngesikhathi sokushicilela.